Ra iisal wasare Rooble oo caro darteed uga baxay Shirka Golaha Wasiurada ee Maanta | Dayniiile.com-Latest news from around the world
Home Warkii Ra iisal wasare Rooble oo caro darteed uga baxay Shirka Golaha Wasiurada...
Ra iisal wasare Rooble oo caro darteed uga baxay Shirka Golaha Wasiurada ee Maanta
Shirka todobaadlaha Golaha Wasiirrada Xukuumadda Federaalka Soomaaliya ayaa lagu ansixiyey Siyaasadda Qaran ee Howl-gabka iyo Liil-tirka Shaqaalaha Rayidka ee Dowladda, Xubin Guddiga Madaxa Bannaan ee Xuduudaha iyo Federaalka, iyadoo la soo bandhigay qorshaha Korontada dalka.
Golaha Wasiirada ayaa warbixin ka dhageystay Wasiirrada Amniga iyo Gaashaandhigga, taasoo ku aadan xasilinta iyo howlgallada amniga dalka.
Wasaaradaha ayaa xaqiijiyey in la dardargelinayo howlgallada lagu sugayo amniga iyo nabadeynta dalka, xiligan muhiimka ah ee lagu jiro doorashooyinka.
Shirka Golaha Wasiirrada oo guddoominayay Ra’iisul Wasaare ku-xigeenka dalka Mudane Mahdi Maxamed Guuleed (Khadar) ayaa Wasaaradda Caafimaadka ku u soo bandhigtay xaaladihii u danbeeyey ee Caabuqa Covid19 iyo saameynta uu ku yeeshay bulshada, waxayna xukuumaddu boggaadisay dadaalka lagu badbaadinayo caafimaadka muwaadiniinta Soomaaliyeed, iyadoo lagu baaqay in la xoojiyo wacyigelinta bulshada.
RW Somalia Maxamed Xuseen Rooble oo markii hore shirkaas gudoominayey ayaa deg deg uga baxay ka dib markii looga yeeray Xafiiska Madaxweyne Farmaajo sida ay sheegayaan ilo wareedyo ku dhow Villa Somalia.
Previous articleTurkiga oo Askar looga Diley Dalka Ciraaq kadib hawl adag oo ay qaadeen Militeriga Turkiga.
Next articleBeesha Caalamka oo cadaadis xoogan ku sareysa in Shirka lagu qbato Muqdisho
Dowlada Iiraan oo Xaqiijisay Markii ugu horaysay in uu Wada hadal...
Saacado yar ka hor inta uusan ka dagin xilka Mareykanka, madaxweyne...
Ciidamo iyo saraakiil ka goostay Jubbaland oo lagu soo bandhigay gobolka...
War deg deg ah: Midowga Musharaxiinta oo goor dhawayd sheegay in...
Ciidamada Haramcadka oo wariyaal ka afdoobtay Km4